Xubin ka tirsan Guddigii Maanta ay ku dhawaaqeen Guddoonka Baarlamaanka oo iscasilay, Sababta,? – Hornafrik Media Network
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa sheegay inuu ka cudur daaranayo xubinimada Guddiga loo saaray kiiskii Qalbi Dhagax iyo qaraarkii Xukuumadda ka qaadatay 6-dii bishan.
Mr Odawaa ayaa sheegay inuu safar shaqo oo uu dibadda ah uu ku maqan yahay, isla markaana aanay u saamixi karin inuu Guddigaas kala shaqeeyo arrinta loo xil saaray, isagoo xusay inuu ka cudur daaranayo.
“Safar shaqo ayaa dibadda ugu maqanahay, inaan guddigaas ka mid noqdo waa ka cudur daaranayaa, anigoo aysan ii saamaxeyn inaan guddigaas la shaqeeyo iyo mudada guddigaas loo qabtay oo aan dalka ka maqanahay”ayuu yiri Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha.
Guddoonka Golaha shacabka ayaa maanta Guddi gaar ah u magacaabay, kuwaasoo ka soo baaraandega arrinta la xiriirta qaraarkii Xukuumadda gaartay ee ku saabsanaa dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax, iyadoo guddigan oo ka kooban 15 xubnood oo Xildhibaano ah laga sugayo inay ugu dambeyn warbixin ka keenaan kiiskan 10-ka bisha October
Waxaa lagu wargeliyay dhamaan hey’adaha ay quseyso inay u fududeyaan, gacana ku siiyaan howlahooda.